Hadda waxaad isticmaali kartaa isbarbar dhiga qiimaha Firefox Lite 2.0. Androidsis
Firefox Lite 2.0 hadda waxaa lagu heli karaa Android qaabkuu yahay APK maxaa yeelay waxaa loo daad gureynayaa gobol ahaan. Browser aan horey ugu aragnay nuucyo kala duwan, sida Firefox Rocket oo hada dhacda in loogu yeero Lite.
A biraawsar loo yaqaan 'braker' oo asal ahaan la fekeray socodka iftiinka iyo taasi waxay u oggolaaneysaa khibrad In ka badan raaxo in la dhex maro websaydhyo kala duwan ama waxaan si fudud u dhex mari karnaa boggayaga jecel gudaha, sida Androidsis.
1 Akhbaarta ugu muhiimsan Firefox Lite 2.0
2 Browser wuxuu diiradda saaray asturnaanta iyo inuu aad u fudud yahay
3 Isbarbardhiga qiimaha
Akhbaarta ugu muhiimsan Firefox Lite 2.0
Marka laga reebo miisaan fudud oo u oggolaanaya daalacashada degdegga ah, Firefox Lite 2.0 waxaa lagu gartaa asturnaanta. Si kale haddii loo dhigo, waxay siinaysaa isticmaaleha qalab qaar ka mid ah si loo ilaaliyo asturnaantooda iyo isku dhawaanshahooda markay wax daalacanayaan. Kaliya kama hadlayno lahaanshaha asturnaanta asturnaanta, laakiin waxaad gacanta ku haysaa suurtagalnimada inaad xireyso jidka loo maro trackers ama cookies iyo xitaa inaad xannibto xayeysiiska aad rabto.
Firefox Lite taas wuxuu bedelay magaca ilaa 4 jeer iyo in ugu dambeyntii, qaybta 2.0, waxaad horeyba uga heli kartaa Lite. Cusbooneysiintan cusub, Firefox Lite waxay la timid muuqaalo cusub oo aanan iska indha tiri karin xiisaha ay kicin karaan darteed.
Waxaan ka hadlaynaa hadda waad awoodi kartaa qaado shaashado shaashad buuxda si aad u badbaadiso boggaas. Sidoo kale waxaa lagu soo daray guriga biraawsarka suurtagalnimada helitaanka tiro wanaagsan oo ciyaaro ah iyo waxa noqon lahaa isku-duwaha wararka; In kasta oo kani, haddii aad isticmaasho APK, aanu ku siinaynin wax war ah oo ay tahay inuu wax ku yeesho xaqiiqda ah in aan weli la geyn dalkeenna.
In kastoo kuwa internetka wax ku iibsada, ugubka ugu xiisaha badan waa isbarbardhiga qiimaha ee aan ku wada haysanno isla guriga. Waa baar raadis ah oo noo ogolaanaya inaan isbarbar dhigno qiimaha badeecadaha iyo taas maalmahan ka socda Alliexpress, Jimco Madoow iyo Kirismas, xitaa lama rinjiyeyn.
Browser wuxuu diiradda saaray asturnaanta iyo inuu aad u fudud yahay
La jaanqaadista biraawsarka, marka laga reebo wararka sheegaya, runta ayaa ah in si fiican u dhaqaaqo oo waxay bixisaa waayo-aragnimo weyn marin. Faahfaahinta qaar waa kuwo xiiso leh, sida barta baaritaanka, markii bogga la furo, waxay ku muuqataa far yar oo ka yar bogga intiisa kale taasina waxay siineysaa dhibic fiican, oo had iyo jeer laga fiirsado aragtida qaabka isdhexgalka.
Xagga hoose waxaan marin u leenahay dhammaan xulashooyinka Firefox Lite 2.0 taasina waxay noo oggolaaneysaa inaan marinno habka habeenkii, qarsoodi, tabs, taariikhda, qabashadaada, qaabka turbo, quful sawirrada, raadinta, keydka nadiifka ah, dejinta iyo xiro. Si kale haddii loo dhigo, waxaan haysannaa dhammaan qalabkii gacanta lagu hayey ee lagula tacaali lahaa waayo-aragnimada daalacashada Firefox Lite.
Y dhammaantood waxaa lagu carfiyey naqshad yar taasi waxay dhigeysaa wax walba meeshiisa waxayna ka dhigaysaa in lagu maareeyo dhamaan walxaha qaab aad u fudud. Halkan waxaad ka arki kartaa gacanta Firefox si aad uga dhigto biraawsarkan mid aad jeceshahay.
Kuwaas oo kale maalmaha Jimcaha Madow iyo Kirismaskaas wax yar uun koone (yaa oran lahaa 13ka Noofeembar waxaan dhihi doonnaa tan), isbarbardhigga qiimaha Firefox Lite wuxuu ku imaan karaa waxtar.
Waxaan ku haysannaa guriga, dhinaca bidix ee hoose waxaan ku haysannaa astaanta muraayadda weyneysa iyo dukaanka. Waxaan ku gujineynaa, waana qori karnaa sheyga la doonayo. Waxaan riixnaa gal, waxaanuna aadeynaa shaashad kale taas oo xagga hoose aan ku leenahay tab kala duwan dukaan kasta oo internetka caan ku ah. Taasi waa, Google, Aliexpress, Amazon, iyo xitaa eBay. Waa maxay Ma jeclin inay tahay inaysan siin ikhtiyaarro loogu talagalay dukaamada kale ee internetka, waxaana jira daaqado dhijitaal ah oo aad u tiro badan oo aad ku eegi karto qiimaha iyo wax soo saarka wanaagsan.
Waxaan gujineynaa tab kasta oo sidaas darteed waxaan si dhakhso leh u arki karnaa sida qiimaha u beddelo dukaan kasta. Amuuqaal cusub oo Firefox Lite 2.0 ah oo aad uga raaxeysan karto APK-ka in aad hoos ka soo dejisan karto; waxaad leedahay diiwaangelinta barnaamijka kahor.
Firefox Lite 2.0 - Download APK
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » [Soo Degso APK] Firefox Lite 2.0 hadda waxaa laga heli karaa Android: hadda waxaa kujira isbarbardhig qiimo ah